राजेन्द्रमान डङ्गोल - | Nagarik News - Nepal Republic Media
राजेन्द्रमान डङ्गोलका लेखहरु :
अचानक लुरि गुम्बामा
सानो प्वालबाट छिरेको प्रकाशले गुफाको अन्धकार चिर्न सकेको छैन । अत्यासै लाग्ने ! भन्न नसकेर मात्र हो–मुटु ढक्क फुलिसकेको छ । सोच्छु– कस्तो कठोर तपस्या गरेका होलान् ती लामाहरूले यस्तो आकाशे गुफामा बसेर ।
राजेन्द्रमान डङ्गोल २६ वैशाख २०७७ शुक्रबार ४० मिनेट पाठ
धर्तीकै चोखो वनस्पति उपहार पाउँदा...
तिजीको रसमा डुबिरहेका थिए विदेशी । कोही ठिङ्ग उभिएर त कोही थुपुक्क भुइँमा बसेर । कुर्सीमा आसिन कतिपय त ल्हो–मन्थाङ्का पर्यटन व्यवसायी नै थिए । आतिथ्य व्यवसायमा लागेर पनि किन कसैको ध्यान नपुगेको होला ? ...देख्नेलाई लाज भनेझैँ भएको थियो मलाई ।
राजेन्द्रमान डङ्गोल १३ वैशाख २०७७ शनिबार ३८ मिनेट पाठ
पद्मसंभवले र शिवपार्वतीले मन पराएको गाउँतिर...
एउटा महातीर्थस्थल । अमूल्य चीज लुकेको ठाउँ । आमा झ्योमो याङ्ग्री(देवी)ले रक्षा गरेको क्षेत्र । प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यले सिँगारिएको । हिमाल, पहाड र बेसीले सजिएको । विविध संस्कृति र भेषभुषा अङ्गालेको । गुम्बैगुम्बा र चैत्यले भरिएको । आठौँ शताब्दीमै पद्मसंभव र ऋषी चोग्यालले ध्यान गरेको ठाउँ हो– हेलम्बु ।
राजेन्द्रमान डङ्गोल २९ चैत्र २०७६ शनिबार ७५ मिनेट पाठ
राजेन्द्रमान डङ्गोलका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्